Ɛrenkyɛ wɔbɛto Yerusalem ho akoban (1-9)
Yehowa bo afuw Yerusalem (10-21)
Wɔka sɛ “Asomdwoe!” Nanso asomdwoe biara nni hɔ (14)
Ɔman bi befi atifi fam abɛtow ahyɛ wɔn so ateetee wɔn (22-26)
Yeremia bɛsɔ dade ahwɛ (27-30)
6 O Benyamin mma, mompɛ baabi nhintaw, munguan mfi Yerusalem. Mommɔ abɛn+ no wɔ Tekoa;+Monsɔ ogya mfa nyɛ ahyɛnsode wɔ Bet-Hakerem! Efisɛ mmusu bi fi atifi fam reba, ɔsɛe kɛse bi.+ 2 Sion babea te sɛ ɔbea hoɔfɛfo a wogyigye no so.+ 3 Nguanhwɛfo ne wɔn nguankuw bɛba. Wobesisi wɔn ntamadan atwa ne ho ahyia,+Na obiara bɛma ne nguan adidi.+ 4 “Munsiesie mo ho* ne no nkɔko! Monsɔre mma yɛnkɔtow nhyɛ no so awia ketee!” “Asɛm ato yɛn! Efisɛ ade resa,Na anwummere sunsuma reyɛ tenten!” 5 “Monsɔre mma yɛnkɔtow nhyɛ no so anadwo,Na yɛnsɛe n’aban a ɛyɛ den no.”+ 6 Na nea asafo Yehowa aka ni: “Muntwitwa nnua na monto Yerusalem ho akoban.*+ Ɛyɛ kurow a ɛsɛ sɛ etua ne bɔne so ka;Nhyɛso nko ara na ɛwɔ ne mu.+ 7 Sɛnea abura ma nsu a ɛwom yɛ nwini no,Saa ara na ɔma ne bɔne yɛ nwini. Wɔte sɛ basabasayɛ ne ɔsɛe rekɔ so wɔ ne mu;+Ɔyare ne ɔhaw na ɛwɔ m’anim daa. 8 O Yerusalem, hwɛ yiye, anyɛ saa a, wo ho bɛyɛ me abofono ama matwe me ho* afi wo ho;+Mɛma woayɛ amamfo, asaase a obiara nte so.”+ 9 Nea asafo Yehowa aka ni: “Wɔbɛsesaw Israelfo a aka no akɔ korakora, sɛnea wɔtetew bobe a aka wɔ ne dua so no. Ma wo nsa nni akɔneaba sɛ obi a ɔretetew bobe afi bobe dua so.” 10 “Henanom na menkasa nkyerɛ wɔn na memmɔ wɔn kɔkɔ? Henanom na wobetie? Hwɛ! Wɔasisiw wɔn aso* sɛnea ɛbɛyɛ a ɛrente asɛm.+ Hwɛ! Yehowa asɛm yɛ wɔn ahĩ;+Wonni ho anigye biara. 11 Ɛno nti Yehowa abufuw ahyɛ me ma.Makura mu abrɛ.”+ “Hwie gu abofra a ɔnam abɔnten so,+Ne mmerante a wɔaboa wɔn ano so. Wɔbɛkyere wɔn nyinaa, ɔbarima ne ne yere,Nkwakoraa ne nkwakoraa posoposo.*+ 12 Wɔn afi bɛyɛ nkurɔfo dea;Wɔn nsaase ne wɔn yerenom nso bɛyɛ nkurɔfo dea.+ Na mɛteɛ me nsa wɔ asaase no sofo so,” Yehowa asɛm ni. 13 “Efisɛ efi akumaa so kosi ɔkɛse so, obiara pɛ mfaso bɔne;+Efi odiyifo so kosi ɔsɔfo so, wɔn nyinaa bu nkurɔfo fa so.+ 14 Wɔsa me man akuru biarabiara,* na wɔka sɛ,‘Asomdwoe wɔ hɔ! Asomdwoe wɔ hɔ!’ Nanso asomdwoe biara nni hɔ.+ 15 Akyiwade a wɔayɛ no, ɛyɛ wɔn aniwu anaa? Ɛnyɛ wɔn aniwu koraa! Wɔn ani mmu wɔn dwɛ!* Ɛno nti, wɔbɛhwehwe ase wɔ wɔn a wɔahwehwe ase mu.+ Na ɛda a mɛba abɛtwe wɔn aso no, wobehintihintiw,” Yehowa na waka. 16 Nea Yehowa aka ni: “Munkogyina nkwanta so na monhwɛ. Mummisa tete akwantempɔn no ho asɛm,Mummisa baabi a ɔkwan pa no wɔ, na momfa so,+Na mo ho nnwo mo.”* Nanso wɔkae sɛ: “Yɛremfa so.”+ 17 “Mede awɛmfo sisii mo so,+ na wɔkae sɛ,‘Muntie abɛn no nnyigyei no!’”+ Nanso wɔkae sɛ: “Yɛrentie.”+ 18 “Ɛno nti, O amanaman, muntie! O asafo, munhuNea ɛbɛto wɔn. 19 O asaase, yɛ aso! Mede amanehunu reba ɔman yi so;+Ɛyɛ wɔn adwemmɔne so aba na wɔretwa,Efisɛ wɔantie me nsɛm,Na wɔpoo me mmara.”* 20 “Sɛ mode ɛhyɛ* fi Saba ba a, ɛfa me ho bɛn?Na mode sibiri huamhuam* fi akyirikyiri asaase so ba a, dɛn na ɛbɛyɛ ama me? Mempɛ mo hyew afɔre,Na mo afɔre nso nsɔ m’ani.”+ 21 Enti nea Yehowa aka ni: “Mede hintidua bɛto ɔman yi anim,Na ɛbɛma wɔahintiw,Agyanom ne mma nyinaa,Ofipamfo ne ne yɔnko,Na wɔn nyinaa bɛsɛe.”+ 22 Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ! Ɔman bi fi atifi asaase so reba,Wɔbɛkanyan ɔman kɛse bi afi asaase ano akyirikyiri aba.+ 23 Wɔde agyan ne peaw na ɛbɛba. Wɔn tirim yɛ den, na wɔrenhu obiara mmɔbɔ. Wɔn nne begyigye te sɛ ɛpo,Na wɔtete apɔnkɔ so.+ Wɔbɛboaboa wɔn ho ano aba wo so te sɛ ɔsabarima, O Sion babea.” 24 Yɛate ho asɛm. Yɛn nsam agow;+Yɛn ho yeraw yɛn,Yɛte yaw te sɛ ɔbea a ɔrewo.+ 25 Mpue nkɔ afuw mu,Na nkɔnantew ɔkwan so,Efisɛ ɔtamfo no wɔ sekan;Ehu atwa wo ho ahyia. 26 O me man babea,Fura awerɛhow ntama,*+ na munumunum wɔ nsõ mu. Di awerɛhow te sɛ obi a ɔresu teɛteɛm di ne ba baako pɛ wu ho awerɛhow,+Efisɛ prɛko pɛ na ɔsɛefo no bɛba yɛn so.+ 27 “Mede wo* asi hɔ sɛ obi a ɔsɔ dade hwɛ wɔ me man mu,Obi a ɔhwehwɛ nneɛma mu yiye;Fa w’ani to fam hwɛ wɔn yiye, na hwehwɛ wɔn akwan mu. 28 Wɔn nyinaa aso yɛ den dodo;+Wɔnenam sɛe nkurɔfo din.+ Wɔte sɛ kɔbere ne dade;Wɔn nyinaa asɛe. 29 Afa* no ahyew. Sumpii* na wonya fi wɔn gya mu. Wɔyere wɔn ho nan no kwa,+Na wonyii abɔnefo mfii wɔn mu.+ 30 Nkurɔfo bɛfrɛ wɔn sɛ dwetɛ a wɔapo,Efisɛ Yehowa apo wɔn.”+
^ Nt., “Montew mo ho.”
^ Anaa “me kra atwe ne ho.”
^ Nt., “Wontwaa wɔn aso twetia.”
^ Nt., “Wɔn a wɔadi nna amee.”
^ Anaa “Wɔnteɛ wɔn ho nsa me man akuru yiye.”
^ Anaa “mo kra ho nnwo no.”
^ Ade a ɔtomfo de fita ogya mu ma ɛsɔ kɔɔ.